Parabola: zvachose yemahara Arch-based distro | Kubva kuLinux
Parabola: yakasununguka zvachose Arch-based distro
Parabola GNU / Linux kugovera kunoenderana ne Arch Linux asi izvo zvinongogamuchira software iyo rezinesi iri 100% yemahara. Pakutanga iyo brainchild yenhengo dze gNewSense Chirungu IRC chiteshi, haina kuwana vakawanda vanopa pakutanga. Gare gare, vashandisi vanobva munzvimbo dzakasiyana dzeArch, kunyanya vanotaura chiSpanish, vakabatana. Nhasi uno nharaunda yeParabola iri kukura, nemipiro kubva kumativi ese epasi.Nditende kana ndikakuudza kuti iyi idistro yekuedza uye kudanana nayo.
Rinenge gore rapfuura Parabola GNU / Linux nharaunda yakatanga chirongwa: kupa yemahara software nharaunda nemukana wekushandisa yakasununguka zvachose Arch Linux proprietary software.
Nhasi tine zvinyorwa uye zvinogoneka dhisiki mifananidzo yeiyi inoshamisa GNU / Linux kugovera, kubva kune ayo ese-emahara software zvikamu zviri mune ayo epamutemo marekodhi zvakabviswa, uye zvatsiviwa nedzimwe mahara.
Muenzaniso wekutanga ndeyeLinux-yakasununguka, iyo kernel isina blobs kana yeimba firmware. Inoteverwa neGNU IceCat, iyo yemahara yakabva kuMozilla Firefox isingakurudzire ma-add-on asiri emahara uye isingakurudzire mabasa anokushora, senge injini yekutsvaga yeGoogle.
1 Nei uchishandisa Parabola?
2 Svinura Arch Linux
4 Chibvumirano cheMagariro eParabola GNU / Linux
Nei uchishandisa Parabola?
Parabola yakaenzana nerusununguko rwe software pamwe nesimba rese kune vashandisi. GNU pamwe neArch nzira.Nechisimba yekuvandudza system, yakapusa kuitisa, yakapusa kurongedza, unogona kuvaka yako sisitimu nenzira yaunoda uye kudzidza zvakawanda munzira.
Svinura Arch Linux
Kutevera mweya we minimalist, KISSkubva kuArch, takaita kuti kusunungurwa kwake kuve nyore sezvaari. Kuti usunungure yako Arch Linux kuisirwa, ingoisa yedu runyorwa rwemahara reposheni uye kugadzirisa iyo system.
Hapana chikonzero chekuisazve.
Sezvo sekunge izvi zvaive zvisina kukwana, Parabola GNU / Linux ichangobva kuverengerwa mu runyorwa rwemahara kugovera inokurudzirwa ne Mahara Software Foundation (FSF).
Kufanana naamai vayo distro, Parabola inoshandisa imwechete package system, Pacman, uye inozivikanwa nekuve rolling kuburitsa distro, ndiko kuti, inogara mukugara uchigadzirisa, kuitira kuti zvisazodiwa fomati uye kumisikidza zvese kubva kutanga nguva imwe neimwe a vhezheni itsva inobuda.
Parizvino, hapana zita reshanduro rinotsanangurwa sezvo iri chirongwa chiri kutanga. Pane nzira mbiri dzekuiwana, kungave nemifananidzo yeIO kana iwe unogona kuita kutama kubva kune yakamboiswa Arch Linux, uchichinja chete runyorwa rwezvinyorwa zveParabola's, izvo zvine chete 2% yemahara software. Mapakeji ayo ese akatsimbirirwa uchishandisa fomati yeXZ, iyo inoshandisa iyo LZMA algorithm
Chibvumirano cheMagariro eParabola GNU / Linux
Iyo Parabola GNU / Linux kontrakiti yemagariro ndeye kuzvipira kuzvipira kune yemahara software nharaunda mune zvakajairika uye vashandisi vayo kunyanya.
Mufananidzo GNU / Linux mahara software: inoteera iyo GNU "Mirayiridzo yemahara sosi yekugovera", saka haina kusanganisira, kana kukurudzira proprietary software, uye haina kupa zvinyorwa kana chero mhando yerutsigiro rwekuisirwa kana kuitiswa. Izvi zvinosanganisira: proprietary software, binary-chete firmware, kana mabhurumu emabhinari.
Mufananidzo GNU / Linux uye kumwe kugovera: Chinangwa cheParabola ndechekutsigira Mahara Software Movement, saka isu tinongokwikwidza kupokana neyako software. Parabola anoedza kushanda pamwe nemamwe maPurojekiti eSoftware, nekugona kwese kwaanogona, uye ruzivo rwese pane yedu projekiti ruchawanikwa kune chero munhu anochida. Izvi zvakare zvinosanganisira mapakeji uye zvinyorwa.
Mufananidzo GNU / Linux nenharaunda yayo: nharaunda yedu ine demokrasi, saka nharaunda inobvunzwa panofanirwa kuitwa sarudzo. Isu tinokurudzira kutora chikamu kwenharaunda mukuvandudzwa kweprojekti.
Mufananidzo GNU / Linux uye ArchLinux: Parabola ndiyo yemahara vhezheni yeArchLinux. Isu tinopa izvo zvinyorwa uye yekuisa mifananidzo pasina chero epamhepo software. Isu tinoremekedza Arch's KISS (Chengeta Icho Chakareruka, Kupusa) uzivi uye maitiro ayo ekusimudzira. Mupfungwa iyoyo, Parabola anogara achiichengeta ichidzokera kumashure inoenderana neArchLinux, kuitira kuti ibatsire kusunungura maficha apfuura ayo atove kushanda.
Dhawunirodha Parabola GNU / Linux
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » FileLet's UseLinux » Parabola: yakasununguka zvachose Arch-based distro
Mhoro shamwari, unogona kutsanangura zvakadzama maitiro ekuisa parabola gnu / linux?
Yakanaka distro, ini ndiri archero ... asi ikozvino ini ndoda kutsigira 100% yemahara software (:
Saka ... kuiisa zvakanzi 😀
Imwe nguva yapfuura ndakaverenga chinyorwa chakatsanangura maitiro ekuona izvo zvisina-mapakeji mapakeji atinawo muDebian. Ini ndinofungidzira kuti chimwe chinhu chakadai hachizove nyore muArch ... Pane chero munhu anoziva chero nzira inoshanda? Chinangwa changu kupfuudza Arch yangu kuParabola kana ndikaona kuti handina dambudziko nemidziyo yangu. Ini ndinofungidzira iro dambudziko rakakomba raigona kuuya kubva pakati.
Imwe sarudzo ndeyekushandura zvinyorwa uye uone zvinoitika, asi chokwadika, kuisa Arch kunyangwe isina kuomarara, haisi nyore senge mamwe ma distros, uye zvaizondipa hunyope.
Ndigadzirise kana ndakanganisa, zvingave here kuti Parabola ari kushanda papakeji iro rinoita basa? https://projects.parabolagnulinux.org/blacklist.git/
Ini ndinofungidzira vakaunza kunze kweArch.
Internet mumaoko mashoma